हिब्रू १० | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१० मोशाको व्यवस्था वास्तविकता नभएर आउन लागेका असल कुराहरूको छाया मात्र हो। त्यसैले पुजारीहरूले सालिन्दा एउटै किसिमका बलिदानहरू निरन्तर चढाए पनि त्यसले परमेश्वरका उपासकहरूलाई पूर्ण बनाउन सक्दैन। २ अन्यथा, के बलिदान चढाउने काम बन्द भइसक्ने थिएन र? किनकि पवित्र सेवा चढाउने मानिसहरू सधैंका लागि शुद्ध भइसकेका भए तिनीहरूलाई आफू पापी हुँ भन्ने चेतना नै हुने थिएन। ३ बरु यसको ठीक विपरीत यी बलिदानहरूले सालिन्दा तिनीहरूलाई आफ्ना पापहरूको सम्झना गराइरहन्थ्यो। ४ किनकि साँढे अनि बोकाहरूको रगतले पापहरू हटाउन असम्भव छ। ५ त्यसैले, जब उहाँ संसारमा आउनुभयो तब परमेश्वरलाई यसो भन्नुभयो: “ ‘बलिदान र भेटी तपाईंले चाहनुभएन, तर तपाईंले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नुभयो। ६ तपाईंले अग्निभेटी र पापभेटी स्वीकार्नुभएन।’ ७ तब मैले भनें,* ‘हे परमेश्वर, हेर्नुहोस्, तपाईंको इच्छा पूरा गर्न म आएँ (जस्तो पुस्तकको मुठामा मेरो विषयमा लेखिएको छ)।’ ” ८ “तपाईंले बलिदान, भेटी, अग्निभेटी अनि पापभेटीहरू”—जुन मोशाको व्यवस्थाबमोजिम चढाइने बलिदानहरू हुन्‌—“न त चाहनुभयो न स्वीकार्नुभयो” भनेर पहिला भनिसक्नुभएपछि ९ बल्ल उहाँ यसो भन्नुहुन्छ: “हेर्नुहोस्, तपाईंको इच्छा पूरा गर्न म आएँ।” नयाँलाई स्थापित गर्न सकियोस् भनेर उहाँ पुरानोलाई विस्थापित गर्नुहुन्छ। १० येशू ख्रीष्टले एकैचोटि सधैंभरिका लागि चढाउनुभएको आफ्नो शरीरको भेटीले गर्दा यही ‘इच्छाद्वारा’ हामी पवित्र पारिएका छौं। ११ साथै, बलिदानहरूले पापहरू पूरै हटाउन कहिल्यै सम्भव छैन। त्यसैले त दिनहुँ मानिसहरूको सेवा गर्न र एउटै किसिमका बलिदानहरू बारम्बार चढाउन हरेक पुजारी आ-आफ्नो ठाउँमा खडा हुन्छन्‌। १२ तर उहाँले पापहरूका निम्ति सधैंभरिका लागि एउटा बलिदान चढाउनुभयो र परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ बस्नुभयो। १३ त्यसबेलादेखि उहाँ त्यो समयलाई पर्खिरहनुभएको छ, जुन बेला उहाँका शत्रुहरूलाई उहाँको पाउदान तुल्याइनेछ। १४ किनकि पवित्र पारिंदै गरेकाहरू सबैलाई उहाँले एउटै बलिदानद्वारा सधैंभरिका लागि पूर्ण बनाउनुभएको छ। १५ यसबाहेक, पवित्र शक्तिले पनि हामीलाई साक्षी दिन्छ, किनकि त्यसले पहिले यसो भन्छ: १६ “ ‘ती दिनहरूपछि तिनीहरूसित मैले गर्ने करार यही करार हो,’ यहोवा भन्नुहुन्छ। ‘मेरा नियमहरू म तिनीहरूको मनमा राखिदिनेछु र तिनीहरूको दिमागमा ती लेखिदिनेछु।’ ” १७ त्यसपछि यसो भन्छ: “अनि म तिनीहरूका पापहरू र तिनीहरूका कुकर्महरू फेरि कहिल्यै सम्झनेछैन।” १८ अब जहाँ यी पापहरूको क्षमा हुन्छ, त्यहाँ त्यसका लागि भेटीको कुनै आवश्यकता हुँदैन। १९ तसर्थ, ए भाइहरू हो, येशूको रगतले गर्दा हामीसित महापवित्रस्थानभित्र पस्ने हिम्मत छ, २० जहाँ पुग्न उहाँले हाम्रो निम्ति नयाँ र जीवित बाटो खोल्नुभयो, जुन बाटो पर्दा भएर जान्छ र त्यो पर्दा उहाँको शरीर हो। २१ साथै, परमेश्वरको घरानामाथि खटाइएको महान्‌ पुजारी हामीसित हुनुहुन्छ। २२ त्यसैले आओ, विश्वासका साथ अनि निर्धक्क भएर पूरा मनले परमेश्वरसामु जाऔं। किनकि हाम्रो मन अनि खराब अन्तस्करण शुद्ध पारिएको छ* अनि हाम्रो शरीर सफा पानीले धोइएको छ। २३ आओ, हामी नधरमराई आफ्नो आशा जनसमक्ष घोषणा गरिरहौं, किनकि प्रतिज्ञा गर्ने जो हुनुहुन्छ, उहाँ भरोसायोग्य हुनुहुन्छ। २४ अनि आपसमा गहिरो चासो राखेर हामी एक-अर्कालाई प्रेम र सुकर्म गर्न उत्साहित बनाऔं, २५ कसै-कसैलाई बानी परेजस्तै हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौं, बरु एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिइरहौं, अनि दिन जति-जति नजिक हुँदै गइरहेको देख्छौं, झन्‌ बढी त्यसो गरिरहौं। २६ सत्यको सही ज्ञान पाएपछि यदि हामी जानाजानी पाप गरिरहन्छौं भने हाम्रा पापहरूको निम्ति कुनै बलिदान बाँकी रहँदैन। २७ बाँकी रहन्छ त केवल न्यायको भयावह पर्खाइ अनि विरोधीहरूलाई भस्म गर्ने क्रोधको आगो। २८ यदि मोशाको व्यवस्थाको अवहेलना गर्ने मानिसलाई दुई वा तीन जनाले दिएको साक्षीको आधारमा कुनै दयामाया नदेखाई मृत्युदण्ड दिइन्छ भने २९ तिमीहरू सोच त, त्यो मानिस झन्‌ कति कठोर दण्ड पाउन लायक हुनेछ, जसले परमेश्वरको छोरालाई कुल्चेको छ, अनि जुन करारको रगतले आफूलाई पवित्र बनायो, त्यसैलाई मूल्यहीन सम्झेको छ अनि जसले परमेश्वरले देखाउनुभएको असीम अनुग्रहलाई हेय दृष्टिले हेरेर पवित्र शक्तिको अपमान गरेको छ? ३० किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको यो कुरा हामीलाई थाह छ: “बदला लिने काम मेरो हो, म साटो फेर्नेछु।” अनि फेरि: “यहोवाले आफ्ना मानिसहरूको न्याय गर्नुहुनेछ।” ३१ जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरा हो। ३२ तथापि, तिमीहरू पहिले-पहिलेका ती दिनहरू सम्झिरहो, जुन बेला ज्ञानको ज्योति पाइसकेपछि तिमीहरूले ठूलो सङ्घर्ष गरेर दुःखकष्टलाई सह्यौ। ३३ अपमान र सङ्कष्ट सहेर कहिले तिमीहरू रङ्गमञ्चको तमासाजस्तो भयौ भने कहिलेचाहिं त्यस्ता कुराहरू अनुभव गर्नेहरूलाई तिमीहरूले साथ दियौ। ३४ तिमीहरूले झ्यालखानामा हुनेहरूलाई सहानुभूति देखायौ अनि आफ्नो सम्पत्ति लुटिंदा हाँसी-हाँसी सह्यौ, किनकि तिमीहरूसित त्योभन्दा उत्तम अनि स्थायी सम्पत्ति छ भनेर तिमीहरूलाई थाह थियो। ३५ तसर्थ, निर्धक्क भई बोल्ने साहस गरिरहो किनकि त्यसबापत तिमीहरूले ठूलो इनाम पाउनेछौ। ३६ अनि तिमीहरू सहनशील हुनु आवश्यक छ किनकि परमेश्वरको इच्छा पूरा गरिसकेपछि तब तिमीहरूले त्यो कुरा पाउन सक्नेछौ, जसको विषयमा उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। ३७ किनकि “थोरै समय मात्र” बाँकी छ, अनि “जो आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ ढिलो नगरी आउनुहुनेछ।” ३८ “तर मेरो स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिस विश्वासद्वारा नै जिउनेछ,” अनि “यदि ऊ पछि हट्छ भने म* ऊसित खुसी हुनेछैन।” ३९ अब हामी पछि हटेर नाश हुने खालका मानिसहरू होइनौं, बरु विश्वास राखेर आफूलाई* बचाउने खालका मानिसहरू हौं।
^ हिब्रू १०:७ * वा, “ख्रीष्टले भन्नुभयो।”
^ हिब्रू १०:२२ * शाब्दिक, “छर्किएको छ,” जसको अर्थ हो, येशूको रगत छर्किएको।
^ हिब्रू १०:३८ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।
^ हिब्रू १०:३९ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।